Pillar စျေး - အွန်လိုင်း PLR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Pillar (PLR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Pillar (PLR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Pillar ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $7 266 235.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Pillar တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Pillar များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PillarPLR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0268PillarPLR သို့ ယူရိုEUR€0.0226PillarPLR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0204PillarPLR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0244PillarPLR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.241PillarPLR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.168PillarPLR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.595PillarPLR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0999PillarPLR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0357PillarPLR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0371PillarPLR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.6PillarPLR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.208PillarPLR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.144PillarPLR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.01PillarPLR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.53PillarPLR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0367PillarPLR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0402PillarPLR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.835PillarPLR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.187PillarPLR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.83PillarPLR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩31.79PillarPLR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦10.21PillarPLR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.97PillarPLR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.744
PillarPLR သို့ BitcoinBTC0.000002 PillarPLR သို့ EthereumETH0.00007 PillarPLR သို့ LitecoinLTC0.000448 PillarPLR သို့ DigitalCashDASH0.000263 PillarPLR သို့ MoneroXMR0.000286 PillarPLR သို့ NxtNXT1.9 PillarPLR သို့ Ethereum ClassicETC0.00373 PillarPLR သို့ DogecoinDOGE7.48 PillarPLR သို့ ZCashZEC0.000272 PillarPLR သို့ BitsharesBTS1.02 PillarPLR သို့ DigiByteDGB0.981 PillarPLR သို့ RippleXRP0.0869 PillarPLR သို့ BitcoinDarkBTCD0.000899 PillarPLR သို့ PeerCoinPPC0.0922 PillarPLR သို့ CraigsCoinCRAIG11.87 PillarPLR သို့ BitstakeXBS1.11 PillarPLR သို့ PayCoinXPY0.455 PillarPLR သို့ ProsperCoinPRC3.27 PillarPLR သို့ YbCoinYBC0.00001 PillarPLR သို့ DarkKushDANK8.35 PillarPLR သို့ GiveCoinGIVE56.36 PillarPLR သို့ KoboCoinKOBO5.86 PillarPLR သို့ DarkTokenDT0.0247 PillarPLR သို့ CETUS CoinCETI75.23